Dagaal qasaaro gaystay oo ka dhacay deegaano hoostaga Dhooblay | raascasayrmedia.com
← Shabaab oo howlgalo qabuuro burburin ah ka sameeyay Sh/dhexe
Prof.Laasarooni Oo Xoriyadiisi Dib U Helay →
Dagaal qasaaro gaystay oo ka dhacay deegaano hoostaga Dhooblay
Dagaal gaystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac una dhaxeeyay Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo Xarakada Al Shabaab ayaa maanta waxaa uu ka dhacay deegaano hoostaga degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose.
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degmada Dhooblay ee gobolka Jubada Hoose, dagaal culus oo u dhaxeeya Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa Shabaab ayaa ka qarxay Tuulooyin hoostaga degmada Dhooblay ee gobolka Jubada Hoose.
Dagaalka oo la sheegay inay qaadeen Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ayaa waxaa uu qarxay kadib markii ciidamada dowladda ay gaareen Deeganada Shabax iyo Jilma oo sida la tilmaamay 100-KM oo dhinaca degmada Afmadow kaga beegan degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose.
Dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen afar ka mid ah ahaa dhinacyadii dagaalamay halka 8-kalana ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo qaarkood dhaawacyadoodu lagaarsiiyay degmooyinka Kismaayo iyo Dhooblay.
Majiraan wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Shabaab hase ahaatee xiriiro kala duwan oo aanu lasamaynay Saraakiisha Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ayaa waxaa ay dagaaladii ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay deegaanada Hoostaga degmada Dhooblay ay ka sheegteen guulo la taabankaro.
Sarkaal diiday in magaciisa la shaaciyo oo la hadlay Idaacadda Shabelle islamarkaana ku sugan degmada Dhooblay ayaa waxaa uu sheegay in Ciidamada dowladda KMG ay gacanta ku dhigeen Saraakiil ka tirsan Shabaab ayna dileen dagaalyahano ka mid ah Shabaab sida uu hadalka u dhigay, iyadoo aan jirin ilo ka madaxbanaan oo xaqiijinaya Guulahaasi.